Ndị uweojii na-ahụ maka nchekwa nke Pokémon Go | Akụkọ akụrụngwa
Ndị uweojii na-ahụ maka nchekwa nke Pokémon Go dị nchebe
Pokémon Go na-aga n'ihu na-abawanye ihe ịga nke ọma ya n'ụwa niile na ọtụtụ ndị ọrụ na-amalite ịchụ nta niile Pokémon n'okporo ámá, na Spain, ebe ndị National Corps nke ndị uwe ojii mba Spanish ekpebiela ide akwụkwọ ntuziaka iji ezigbo egwuregwu ịba ụba nke ọma.
Ndị Uwe Ojii Mba ahụ achọghị ka ha lekwasị anya na egwuregwu Nintendo, mana ịhụ onyinyo ahụ nke ha ji kwupụta ntuziaka maka iji ụdị egwuregwu a na nke ị ga - ahụ n'isi isiokwu a, ọ dị ka ọ doro anya na egwu ha na-adabere na Pokémon Go.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ ndụmọdụ iji budata ụdị egwuregwu a na ebe kwesịrị ekwesị, na-enweghị igosipụta onwe anyị na ihe egwu na ọtụtụ ịdọ aka ná ntị ndị dị n'etiti dịka ọmụmaatụ A machibidoro iwu ịkpọ Pokémon Go mgbe ị na-anya ụgbọ ala ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè.
Imirikiti ihe anyị hụrụ na ntuziaka a dị ka ihe ezi uche dị na ya, mana anyị ahụla na akụkọ ahụ ụfọdụ ihe mberede ụgbọ ala site na ịchụ nta Pokémon, ọdịda a na-atụghị anya ya na ihe ọghọm na-enweghị isi nke kwesịrị izere ịgbaso ndụmọdụ nke ndị uwe ojii mba.
N’okpuru, anyị na-egosi gị ndụmọdụ na ịdọ aka na ntị niile nke ndị uwe ojii mba ahụ mere anyị site na akaụntụ Twitter ha;
You na-agbaso ndụmọdụ na ịdọ aka na ntị nke ndị uwe ojii mba nyere gbasara Pokémon Go na egwuregwu ndị ọzọ bara ụba?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ndị uweojii na-ahụ maka nchekwa nke Pokémon Go dị nchebe
7 nke kacha mma smartphones na ahịa na Dual SIM
Evan Blass na-akwado na anyị ga-ahụ naanị nsụgharị abụọ nke iPhone 7 codenamed "Sonora" na "Dos Palos"